nandehanan’ireo miaramila nanatanteraka fambolen-kazo tao Manakara ny alarobia hariva lasa teo. Raha tsiahivina, 52 km niala tao an-drenivohitr’i Manakara no nisehoan’ny loza vokatry ny fisian’ny bisikileta iray nanapaka ny lalana ka tsy maintsy nialan’ity fiarabe ity raha nandeha mafy ilay mpamily. Nivadika vokatr’izany ilay fiara ka miaramila telo no maty teo no ho eo raha iray hafa kosa maty teny an-dalana hihazo ny hopitaly. Omaly tokony ho tamin’ny 01 ora maraina sy tamin’ny 02 ora kosa no namoy ny ainy indray ny miaramila roa hafa ka voatery nandefasan’ny Fanjakana fiaramanidina haingana ireo 6 mbola maratra mafy entina hotsaboina eto Antananarivo. Ny roa hafa dia nafindra hopitaly ao Fianarantsoa. Mbola ao anatin’ny fandaminana tanteraka moa ireo tompon’andraikitra any an-toerana hatramin’ny omaly, notronin’ireo fianakavian’ny maty.